Alshabaab: Raga la toogtay nama soo galaan, gabartiina ma dilin – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxa Alshabaab ugu magacaaban gobolka Banaadir, Sheekh Cali Max’med Xuseen (Cali Jabal) ayaa beeniyey iney ururkiisa ka tirsanaayeen labo dhallinyaro ah oo shalay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku toogatay Muqdisho, kuwaasoo lagu helay sida maxkamaddu tiri iney kufsadeen, islamarkaana dileen gabar la oran jiray Nafiso Cusmaan Salaad.
Sarkaalkan oo xalay la hadlay warbaahinta Alshabaab ayaa iska diiday in dhalinyaradii labada ahaa ee shalay lagu toogtay Muqdisho ay ka tirsanaayeen Shabaabul Mujaahidiin.
Sheekh Cali ayaa sidoo kale beeniyey in Alshabaab ka dambeeyeen dilkii bishii April ee sanadkaan Muqdisho logu geystay Nafiso Cusmaan.
“Maanta waxay warbaahintu soo bandhigtay rag Muqdisholagu dilayo iyadoo la sheegayo in ay Mujaahidiinta ka tirsan yihiin, arrinkaasi waa been aan waxba ka jirin, Ragga ladilay meelna kamasoo galaan Shabaabul Mujaahidiin, dadka caadiga ah ee magaalada degan ayay qeyb ka ahaayeen marnaba kama mid noqon Shabaabul Mujaahidiin” ayuu yiri Sheekh Cali Jabal.
Sheekh Cali Jabal wuxuu xaqiijiyay in Al Shabaab cidda ay dagaalka kula jirto uu cad yahay islamarkaana dadka ay dilaan ay warbaahinta ka sheegtaan balse wiilashii Muqdisho lagu toogtay iyo gabadhii horay loogu dilay Yaaqshiid ee Nafiso Cusmaan aanay iyago ka dambeyn.
“Markale waxaan sheegaynaa in aan dilin gabadha, reerkeeda waxaan leenahay annugu bari’ ayaan ka nahay falkaasi namasoo galo, annagu cidda aan dilno waan sheeganaa waana cadyahay cadawga dagaalku naga dhaxeeyo”ayuu hadalkiisa sii raaciyay Sheekh Cali Jabal.
Maxkamadda ciidamada ayaa shalay meel fagaare ah oo ku taalla Muqdisho ku toogataya labo nin oo magacayadooda lagu kala sheegay Xasan Maxamed Cabdi (Salmaan) iyo Shaafici Cabdi Xirsi (Shaataa), kuwaasoo lo hestay iney xaafadda Cocacola ee Muqdisho horay ugu dileen gabar la oran jiray Nafiso oo aheyd ardayad.
Qoraa C/qaadir Oromo oo ku geeriyooday London